Shil Madaxweyne (Faallo uu Yuusuf Garaad ka qoray Maxamed Siyaad Barre) - Caasimada Online
Home Warar Shil Madaxweyne (Faallo uu Yuusuf Garaad ka qoray Maxamed Siyaad Barre)
Shil Madaxweyne (Faallo uu Yuusuf Garaad ka qoray Maxamed Siyaad Barre)
Muqdisho (Caasimada Online) – Intii aan ka shaqeynayay Radio Muqdisho ayaa waxaa xafiiskiisa subax iigu yeeray Madaxa Radio Muqdisho, Maxamed Faarax Xalane Dhaashane, oo aan u maleynayo in uu ahaa ku simaha Agaasimaha Idaacadaha.
Nagra ayaan wax ku duubi jirnay Radio Muqdisho
Waddada Afgooye iyo Muqdisho isku xirta oo ahayd waddooyinka Gobollada midda ugu gaadiid, dad iyo xoolo badan ayay foodda saareen. Roob ayaa da’ayay, ayay wararka qaar sheegeen. Durba waxay isku dhaceen baabuur kale.
Ma ahayn markii ugu horreysay ee Madaxweynuhu uu shil baabuur galo. Waxaa la sheegaa in baabuur uu isagu gacantiisa ku watay uu kula qallibmay gooladda Godinlabe ee Gobolka Galguduud.
Shilka waddada Afgooye waa ka duwan yahay kii hore. Madaxweynaha waxaa madaxa ka gaaray dhaawac loo dhiman karo. Feerahana qaar baa burburay. Waxaa loola cararay Isbitaal ku yaalla dalka Sucuudiga.
Maantuu Caano Cabbay
Idaacadda Qaranku marnaba ma sheegin sida ay Madaxweynaha wax u gaareen iyo dhaawiciisu sida uu halis u yahay. Wasiirka
Warfaafinta, Maxamed Cumar Jees, oo isagu dhaawaca Madaxweynaha qaaday, ayaa isaga oo jooga Sucuudiga wuxuu u warramay BBC. Waxay ahayd dhowr maalmood ka dib markii uu Madaxweynuhu shilka galay.
Wuxuu Wasiirku sheegay in Madaxweynuhu uu ka jabay kalxanta. Weriyihii su’aalaha weydiinayay oo aan u maleynayo in uu ahaa Cabdullaahi Xaaji ayaa su’aalo badan weydiiyay oo ay ka mid ahayd, Raashin ma cuni karaa?
Maxamed Cumar Jees wuxuu bixiyay jawaab daacad ah dhegeystayaashuna ay ku fahmeen culeyska dhaawaca Madaxweynaha. “Maantuu caana cabbay” ayuu yiri Jees.
Qiyaastii bil uu Isbitaal ku maqnaa, oo dadka qaar ay isla dhex marayeen in uu Madaxweynuhu koomo ku jiro, waxaa dalka ka talinayay General Maxamed Cali Samatar. Qof ogaa ma jirin xaaladda Madaxweynuhu waxa ay ku dambeyneyso.
Koox goosad ah oo diiddan in Samatar la wareego awoodda dalka haddii lacalla uu Madaxweynuhu ka kici waayo dhaawaca ayaa sameeyay gadood aan aad dibadda ugu soo bixin. Magac aan rasmi ahayn ayay qaateen ama lagu suntay. Dowladdiina waxay noqotay laba kooxood oo dadka iyada ka tirsan iyo dadka ka aga dhow ama u kuurgala sida weriyayaasha qaarkood ay ka og yihiin.
Golaha Galabta la dhaarinayo waa Xukuumaddii u horreysay ee uu Madaxweynuhu dhiso tan iyo markii uu Isbitaalka ka soo baxay dalkana uu dib ugu soo laabtay. Labadii garab ee is-hayay labadaba dad ayaa ugu jira.
Intaa markii aan xusuustay waxaan fahmay in aan Galabta fursad u haysto in aan arko Madaxweynaha. In aan fursad u haysto in aan dhegeysto hadalkiisa oo aan la tifatirin. In aan u fiirsado bal sida ay Wasiirradu ula dhaqmayaan in ay ka geddisan tahay sidii shilka ka hor iyo in kale. In inta yare ee aan qolka ku wada jirno laga yaabo in aan wax uun ka fahmo xaaladda caafimaad ee Madaxweynaha.
Qeybta Labaad ee Qormadan ayaan uga hadli doonaa wixii ka dhacay fadhiga lagu dhaariyay Golaha Wasiirrada ee uu dhisay Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, dhaawacii shilka baabuur ee Afgooye ka dib. Waxaa kale oo aan idinla wadaagi doonaa qiyaasta aan anigu qaatay.